"I-Irbis TTR 125" ibhekisela ezithuthuthu zomgwaqo ezingaphandle . Lolu hlelo lokusebenza oluhle kakhulu luphelele kubantu abaqalayo, bephupha i-motocross futhi bazimisele ukuzwa okuningi kwe-adrenaline. Kusukela kulesi sihloko uzothola ukuthi yiluhlobo luni lwezemoto ezithuthukile ngaphandle kwe-motorcycle kanye ne-crossovers i-Irbis ikakhulukazi, mayelana nezinzuzo nezinkinga ze-model TTR 125, kanye nokuthi yini okufanele yenziwe uma usanda kuthenga idivayisi.
Kumele kuqondwe ukuthi ukuhlukaniswa emigwaqweni nasemigwaqweni ongena emgwaqeni kunalokho kungabonakali. Phakathi naleso sikhathi, iningi lamamodeli okubhekiswe kulowo owedlule nawo wonke ama-season.
Phakathi kwezimoto ezingekho emgwaqeni zihlukanisa:
I-cross and enduro, nakuba ivela ngaphandle, kodwa ehlukile komunye nomunye.
I-Enduro, okusho ukuthi "i-hardy", isithuthuthu sezokuvakasha ezingekho emgwaqweni. Unzima ngaphezu kwesiphambano, ngakho-ke sinamandla kakhulu. Emagqumeni nasezintabeni, kunzima ukuzungeza, kodwa kulula kakhulu ukuzungeza umuzi nemigwaqo ejwayelekile. Futhi uma ucabanga ukuthi emgwaqweni ungakwazi kalula ukuphuma endaweni ye-asphalt futhi ugibele ngamapulangwe, izitebhisi nezinye izindawo "ezithakazelisayo," lokhu kwenza lolu hlobo lukhangeleke kakhulu. Lezi zithuthuthu azifanelekile ukushayela kwansuku zonke, kodwa ukuzijabulisa nezemidlalo kuzoba yisinqumo esihle kakhulu.
I-Motard kungenzeka, cishe, kubangelwa ukuguqulwa kohlobo lwe-enduro. Ngokujwayelekile banamasondo ayishumi nambili-intshi, uhlelo olunezintambo zokuqhaqhazela nokumisa ukushayela okunethezeka kokubili ku-asphalt nangaphandle komgwaqo. Kukhona "i-supermotard" phakathi kwabakhiqizi abahlukanisa injini enamandla kakhulu.
Ngokwehlukana, singasho ngombono we-pitbike: lena isithuthuthu esincane, esine injini yephethiloli. Kodwa-ke, naphezu kobukhulu bayo besincane, le kid akuyona yonke ingane futhi iyathuthuka ibe yikhilomitha amahlanu ngehora.
Izisusa zomgwaqo zenzelwe izinhlanga ezihamba phambili. Abaningi babo banezinjini ezimbili. Kulula, ngefreyimu eqinisekisiwe, ukumiswa okwesikhatsi eside kanye neyunithi yamandla amakhulu, izithuthuthu. Ngokujwayelekile baqala ngokuqala kokukhahlela futhi abanakho ukukhanya. Phakathi kwazo kunezinguqulo ezincane ezinganeni kanye nezingane.
Umbusi wenkampani ye-crossover "i-Irbis" iboniswe ngamamodeli we-TTR.
I-Motorcycle TTR 125
Le moto ilungele abalandeli bokunyakaza okukhululekile nokukhululekile. Kulungele abagijimi abasha abafuna ukushayela ezungeze le ndawo ngamabhomu, ama-potholes kanye nezici ezifanayo ezingekho komgwaqo. Isivinini esiphezulu sikhilomitha angu-80 ngehora, kodwa ngezandla ezinamakhono omshini owaziwa ngesithuthuthu uzokwazi ukwenza okuningi okuningi.
I-TTR 125 iyi-"Chinese" engakwazi ukuncintisana "neJapane". I-chain ye-Irbis iyincinci, futhi ukufika kunzima kakhulu. Kodwa ezinye izici zisezingeni elifanele. Isibonelo, zihlanganisa uhlaka olunamandla nama-optics anamandla.
Le moto yadalwa ngeso ku Honda CUB. Ibhayisikili libeka kalula isondo elingemuva kusukela gear lokuqala. Lokhu kufezwa ngenxa ye-injini enhle kakhulu: naphezu kwamamitha angu-125 amamitha ayizigidi zamakhilomitha, kulula ukuhamba ngokuthembekile ezindaweni ezibucayi ze-TTR 125. Ukubuyekezwa kwabaningi abathanda ukukholelwa ukuqinisekisa lokhu. Ngenxa yamabhuleki namathayi ukuhlala emgwaqeni wesithuthuthu akulula.
Ngokuqondene namasondo, kudingeke ukuba uqaphele ukuthi bahlome ama-disc brakes. Ngaphezu kokubukeka okuhle kakhulu nokuntuleka kwesidingo sokunakekelwa okukhethekile, kungase kuqaphele ukuthi zingasetshenziswa kalula futhi ziphumelele emgwaqweni. Idamu amabhuleki ekungcola naseqhweni ngeke kubonise imiphumela enjalo, noma kunjalo, lapho ushayela emgwaqeni ogwadule bayashesha ngokushesha.
Naphezu kokuthi i-TTR 125 - izici ze-cross moto, ngokuvamile ezingabandakanyi ukukhanyisa, abathuthukisi baye bangezela isikhanyiso kuso uma isifiso sokushayela emnyama.
Eminye imigwaqo yomphakathi lesi sikhwama asinakwenzeka. Injongo yalo eqondile yizokuzijabulisa kanye ne "pokatushki." Ngaphezu kwalokho, lapho imoto yomgibeli ingakwazi ukuqhutshwa khona, le moto izobhekana nomsebenzi kalula.
Okokuqala, ukugxekwa kuhilela ukuphakama kokufika, okufinyelela ku-820 kuya ku-830 millimeters, kuye ngomhlangano.
Kulabadlali abaningi, ijubane lamakhilomitha angu-80 ngehora lizoba lincane kakhulu, noma kunjalo, uma uhamba nge injini, ungafinyelela amakhilomitha ayikhulu ngehora.
Ukulayisha umthamo ngokwendlela izici eziyi-150 kilogram. Noma kunjalo, empeleni kuvela ukuthi umthwalo onjalo unzima kakhulu kule moto. Ukumiswa kungamane kumile. Kodwa i-crossover ayiklanyelwe abantu ababili. Ngakho ungawuvivinyi.
Ukushintsha amagiya kungabangela ubunzima ekuqaleni, kodwa ekugcineni bajwayele ukuwasebenzisa.
I-Pitbike TTR 125 iphelele kwaWabasaqalayo. Kuhle kahle izinsusa ezihlukahlukene ze-motocross. Ngemuva kwalo, ungaya ezindabeni ezingathí sina ngokuphepha. Wonke amakhono azokwazi ukufunda ku-TTR, azoba usizo ezimweni zomgwaqo nalapho ehamba edolobheni.
Ngaphambi kohambo lwakho lokuqala
Ngokuthenga lesi sikhwama esimangalisayo, ungahlali ngokushesha esikhwameni. Kungcono ukuyihlola kahle futhi mhlawumbe ngisho nokuhlehlisa. Uma singayinaki lesi simiso esilula, esimweni sokuhlolwa esitokisini into ethile ingawa. Kodwa akukho lutho olwesabekayo olwenzekayo, ngoba konke kungalungiswa. Kungcono kakhulu ukuthi uhlole izakhi kusengaphambili, kuhlanganise nokwethenjwa kwezingqinamba. Yilungele ukuthi amabhutshi aphikisiwe. Kuyinto efiselekayo ukugcoba imininingwane, uthele amafutha amasha.
Kunconywa ukuthi ubeke ukuvikelwa kumswakama wokumangalisa ngemuva, ukuze ungagcini ngokushesha ngokungcola. Ngalesi sizathu, isondo elizenzakalelayo noma indwangu elula, ethembekile iyosebenza. Abanye kulolu sebenzisa linoleum. Kuyoba kuhle ukukhulisa amaphiko. Khona-ke kuyoba khona amathuba okungcolile ngokuphelele ngenkathi ushayela odakeni. Ngaphezu kwalokho, udaka luzonqoba imoto, futhi uhlelo lokupholisa alukwazi ukubhekana nale nkinga.
Kuyinto efiselekayo ukuhlola ukutholakala kwembobo e-gasket, etholakala ngaphansi kwesembozo se-tank gas, kanye nokulungisa i-carburetor ebucayi.
Uma wenze izinyathelo ezinjalo, ungaqala ukuhlolwa. Isiphambano esinzima sesiqubulo, eqinisweni, siyoba ngokweqile. Kodwa ngezinye izinguquko futhi lokhu kungenzeka. Ngenxa yalokhu, izihlahla ezintsha zibukhali ukuze zimisiwe, okumelwe zibe ziphindwe kabili kunanini ngaphambili, zilungise izinyawo, futhi ukukhula okuphakeme kufaka isondo elisha ngaphezulu.
Abaningi bahamba kuwo futhi emigwaqweni yomphakathi. Ukuze ukugibela sekube lula, kuyadingeka ukubeka amathayi omgwaqo, izibuko, ikhompyutha yebhayisikili nokwenza uphawu lokumisa.
Futhi uma uphatha amazinyo ayishumi nesishiyagalombili ngezinyosi eziyishumi nesikhombisa, ijubane lomlilo liyokhula, futhi i-torque izokwehla.
Njenganoma iyiphi inqubo, into ingaphula kwi-TTR 125. Izingxenye zokulondoloza, kodwa, akutholaki ubunzima. Zithengiswa kunoma yisiphi isitolo. Izinkinga zivame ukwenzeka ngamakhandlela. Kumelwe bahlanzwe njalo. Kodwa uma isithuthuthu singaqali nhlobo, kuzodingeka usishintshe. Njengoba uhlale uvuza kakhulu, udinga ukushintsha isihlungi sefutha. Futhi, i-asterisk ivame ukuvaleka, futhi ukushayela okusebenzayo kungabangela ukungasebenzi kahle kwe-clutch. Chain kungcono futhi esikhundleni.
Ngokuvamile, mayelana nokubuyekezwa kwe-TTR 125 cishe njalo kuhle. Udinga nje ukwazi ukuthi leli gama linemikhawulo yalo. Futhi uma uqeda ezinye iziphambeko, unethuba elikhulu lokunciphisa imali ukuze uzame nge-motocross.
SNILS (SNILS): lapho ukushintsha, yini imibhalo kudingeka